Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 1t l0913 zom
Zoma 1 Mar.
Amin'ny lafiny maro, ny fahalalana tsara ny toe-tsaina, indrindra ny toe-tsainy momba ny ara-nofo, dia mazava loatra fa mifamatotra amin'ny fahalalana izay niaviantsika. Ohatra: ny toe-tsaina mpandala ny fivoaran'ny zavaboary dia tsy mba manome foto-kevitra manohitra ny fisian'ny fatorana eo amin'ny hetsika ara-nofo sy ny toe-tsaina ara-nofo. Manana karazana "fomba firaisana" maro ny biby. misy karazam-bidy sasany miray etsy sy eroa, ary betsaka ny manam-bady maro. Karazany vitsy monja no manam-bady tokana, kanefa ny fikarohana momba ny firazanan'ny biby dia nanambara fa tsy tena manam-bady tokana akory ireny biby heverina ho tsy manam-bady maro ireny. Amin'ny karazam-biby maro, ny vavy anankiray dia mety hiteraka zanaka maro izay tsy ary ho iray avokoa ny rainy. Raha tsy eo anefa ny fenitra ara-pisainana avy amin'Ilay Mpamorona, dia tsy nanana foto-kevitra isika hoentintsika mamantatra ny fitondran-tena ara-nofo tsara na ratsy. Ny fampirisihana miseho lany ankehitriny ny amin'ny hanekena ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy dia maneho io foto-kevitra io. Ao amin'ny fahazavan'ny Famoronana ihany no ahazoana ny fanambadiana araka ny tokony ho izy.
"Ao amin'ny Testamenta Taloha sy Vaovao, dia ampiasaina ny fatoram-panambadiana mba hanehoana ny firaisana mamy sy masina misy an'i Kristy sy ny vahoakany. Ho an'i Jesosy, ireo lanonana tamin'ny fampakaram-bady dia nandroso tao an-tsainy ny haravoana amin'ilay andro izay hitondrany ny vadiny hody ao an-tokantranon'ny Ray, ka hiara-mipetraka amin'ny Mpanavotra amin'ny fanasana fampakaram-badin'ny Zanak'ondry ny voavotra."- IFM, 145.2.
Ny foto-piaisanana 'Darwinisme' (fisainana mandala ny fivoaran'ny zavaboary miandalana) dia mandà izay zavatra toy ny famoronana ara-Baiboly. Raha misy, inona no mba fitsipika omen'ny 'darwinisme' ho fifehezana ny fitondran-tena ara-nofo, ary nahoana izy ireny no mifanohitra amin'ny ohatra ara-Baiboly?
Inona no ohatra sasany ao amin'ny Baiboly mahakasika fanambadiana mendrika sy tokantrano sambatra? Milazà ohatra vitsivitsy ao amin'ny Baiboly momba ny fanambadiana sy tokantrano tsy vanona. Inona no azontsika ianarana avy amin'izy roa ireo?
Avereno jerena ny famariparitana ny vehivavy/vady tsara ao amin'ny Ohab. 31:10-31. Inona no tokony ho toetry ny lehilahy manana vady tahaka izany?
Amin'ny fomba ahoana no hahatonga ny fiangonana ho toerana iray afaka manampy amin'ny fanamafisana sy ny fampatanjahana ny fanambadiana mendrika? Inona no zavatra azon'ny fiangonanareo atao mba hahatrarana ny tanjona?